Guddiga Dawooyinka ee London waxay eegayaan sharciyeynta xashiishadda • Drugs Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis Guddida Dawooyinka London waxay eegtaa sharciyaynta xashiishadda
cannabisDambiWararkaSharci dejinta & Sharci dejinta
albaabka Ties Inc. 15 May 2022
maqaal by Ties Inc. 15 May 2022
Koox cusub oo baaraysa in xashiishadda laga saaro UK iyo in kale ayaa waxaa sameeyay duqa magaalada London Sadiq Khan.
1 sharciyada xashiishadda
2 Awood malaha
3 Barashada qaabka daroogada Maraykanka
Wasiirkii hore ee cadaalada Lord Charlie Falconer QC ayaa gudoomiye u noqon doona guddigii ugu horeeyey ee abid London loo qabto. Khan ayaa ku tilmaamay booqashadiisa shaqo ee xarun lagu iibiyo xashiishka oo ku taal gobolka California ee Mareykanka mid soo jiidasho leh.
Laakiin xoghayaha arrimaha gudaha Priti Patel ayaa sheegtay in duqa London uu waqtigiisa luminayo sababtoo ah "ma laha awood uu ku sharciyeeyo daroogada". Xisbiga Labour-ka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in xisbigu aanu taageersanayn in la beddelo sharciga daroogada.
Sadiq Khan ayaa sidoo kale la kulmay duqa magaalada Los Angeles Eric Garcetti. cannabis waxa hadda lagu sifeeyay sida Daroogada Heerka B gudaha UK, iyada oo ugu badnaan ciqaabtiisu tahay shan sano oo xadhig ah lahaanshaha.
Sannadkii 1996-kii, marijuana waxa laga helay daawo ahaan gudaha California, 20 sano kadib waad yeelan kartaa, isticmaali kartaa, kori kartaa oo ku tabaruci kartaa maandooriyaha. 2018ka waxaad iibsan kartaa oo iibin kartaa si madadaalo ah markii ugu horeysay
Khan: "Waxaan u baahanahay inaan yeelano wadahadal daacad ah, furan oo ku saabsan taariikhda xashiishadda iyo sharciyadeena UK iyo waayo-aragnimadeena saameynta caafimaad ee la xiriirta dambiyada bulshada dhexdeeda. Sida ugu fiican ee taas loo samayn karo waa komishanka daroogada ee aanu hadda dhisnay. Waxaad ka maqli kartaa khubarada, taasi waa hal shay, laakiin naftaada u arag… waxay ahayd wax xiiso leh in la maqlo dhammaan noocyada shay ee kuwa beera oo beera geedkan.
Markay shaqadeeda dhamaato, komishanku wuxuu talobixin u soo jeedin doonaa hoolka dawladda hoose, dawladda, booliiska, nidaamka cadaaladda dembiyada iyo adeegyada caafimaadka bulshada.
Jaamacadda London waxay samayn doontaa cilmi-baadhis iyo falanqayn ku saabsan saamaynta isbeddel kasta oo siyaasadeed. Iyada oo ka jawaabeysa ku dhawaaqista Khan, Ms Patel ayaa barteeda twitter-ka ku soo qortay in waqtiga duqa magaalada "ay ku fiicnaan lahayd in lagu bixiyo dambiyada daroogada ee London".
“Maayorku awood uma laha inuu sharciyeeyo maandooriyaha. Waxay duminayaan bulshooyinka, waxay jeexjeexayaan qoysas waxayna burburinayaan nolosha," Zeh ayaa yidhi. Xisbigooda ayaa sidoo kale iska fogeeyay hadalka ka soo yeeray Maayarka, isagoo yiri, “Siyaasadda Daroogada laguma wareejin Maayarrada”.
Barashada qaabka daroogada Maraykanka
Arbacadii, Khan wuxuu la kulmay duqa magaalada Los Angeles Eric Garcetti, wuxuuna booqday goob lagu iibiyo xashiishadda iyo beer ku taal magaalada si uu u arko casharrada laga baran karo UK ee ku saabsan daroogada.
Qiyaastii 2,6 milyan oo qof oo ku nool Boqortooyada Midowday (UK) ayaa isticmaalay xashiishad, tirooyin ayaa muujinaya. Xogtan oo ka soo baxday Xafiiska Tirakoobka Qaranka ayaa laga soo bilaabo 2020. Steve Rolles oo ka tirsan Hay'adda Isbeddelka Maandooriyaha ayaa u sheegay BBC Radio London in caasimadda loo baahan yahay si wax looga barto waddamo ay ka mid yihiin Mexico iyo Uruguay kuwaas oo xashiishada ka saaray. Waxaanu yidhi: “Sida iska cad, sida uu maayarku tilmaamay, siyaasadeena xashiishka ma shaqaynayso.
“Ma nixiso dhalinyarada. Waxay dambi ka dhigaysaa dad badan - gaar ahaan dhalinyarada madowga ah - waxayna ku kacdaa nidaamka lacag badan. “Waa inaan eegnaa. Meelo kale oo adduunka ah ayaa xashiishad ka saaray, waxaana rajeyneynaa inaan wax ka baran karno khibradahaas. "
Waxa jira hal qodob oo ay labaduba isku raacsan yihiin Duqa London iyo Xoghayaha Arrimaha Guduhu: Daroogadu waxay hurinaysaa rabshadaha iyo burburinta bulshooyinka iyo nolosha. Dad badan oo reer London ah ayaa laga yaabaa inay ku heshiiyaan Xoghayaha Arrimaha Gudaha in Duqa Magaalada uu luminayo waqtigiisa - iyo lacagta dadweynaha - sameynta Guddiga Dawooyinka ee London. Weli, guddiga cusub ee dawooyinka London waxa laga yaabaa inay awoodaan inay ururiyaan caddayn xooggan si ay u taageeraan isbeddelka habka.
Xigasho: thetimes.co.uk (EN)
cannabisbeerista cannabisdaroogadasiyaasadda daroogadasharci-dejintaBoqortooyada IngiriiskaMaraykankasale
Thailand waxay siinaysaa hal milyan oo dhir xashiish ah oo lacag la'aan ah qoysaska
Jasiiradda Man ee Boqortooyada Ingiriiska ayaa soo saartay sharciga xashiishadda ee beerashada…
Warshadaha xashiishka ayaa si xoog leh uga soo baxa dhibaatada corona
30 Oktoobar 2021
Halsema: sharciyeynta daroogada ma ah xal